I-China Roman Blinds Exporters kanye neNkampani | I-ETEX
AmaRoma Blinds aphefumulelwe ngendwangu ethambile enikeza imizwa ethambile nefudumele yemfashini yendwangu yamakamelo.
● Isistimu: Intambo / I-Wand Control System
● Isibonelo: I-Plain, iJacquard, i-Flocking, iBlackout, iTrulucent, iSheer, izindwangu ezibonisa umlilo
● Indwangu: Uhlobo lokuthunga lohlobo lokusika
● Idivaysi yokuphepha yama blinds ngamunye
Izimpumputhe zothando zakudala zigqoka amafasitela akho ngezinambitha ezinambithekayo. Noma ngabe ukhetha amaphethini endabuko asekhishini, noma amakhethini ezimbali atholakala ngendawo yokuphumula, Okuhle ngokukhawula ukukhanya kwelanga lapho kudingeka, kulula ukusebenzisa futhi kubukeka ngezimpumputhe zothando. Mane nje udonse intambo ukuze uguqule izimpumputhe zendwangu ukuphakama okudingayo ukuze amawindi akho avumele izimpumputhe zakho zothando ukudala ukubukeka kwe-chic ngokubukeka okungaphelelwa isikhathi. Izimpumputhe zaseRoma zilungele ukufakwa okuhlukahlukene. Dala ukubukeka kwaseMedithera ngohlu lwethu lwamagumbi okulala angaboni, noma wenze indawo ephakathi nendawo egumbini lakho lokuphumula ngama-roman blinds amafasitela e-bay.
AmaRoma Blinds athandwa kakhulu ekuhlobiseni ikhaya, ihhovisi, amahhotela, ikhefi, efulethini nasezindaweni eziningi zomphakathi. Siyakwazi ukukhiqiza ngokuya ngosayizi wemininingwane wesidingo semakethe esihlukile.
Izimpumputhe zaseRoma kulula ukufaka, kulula ukuzigcina, ziyageza, ngakho-ke kulula ukuzihlanza.
Izimpumputhe ezisebenzayo zothando akufuneki zicace futhi zilula. Sinikezela ngezimpumputhe ezimnyama ezingenayo izindwangu ezahlukahlukene ngemivimbo kanye namaphethini ukufanisa ukwakheka kwakho okukhona. Enye indlela enhle yamakhethini, izimpumputhe zethu ezingamnyama zibonisa ukufakwa kwamakhandlela ukukhipha ukukhanya lapho udinga futhi unikeze isendlalelo esongeziwe sokufaka, okukugcina ulaliswe embhedeni isikhathi eside lapho udinga okunye ukuvala amehlo.
Izimpumputhe zaseRoma ezinhlobonhlobo zombala kufaka phakathi okumhlophe, okumpunga, okubomvu, okubomvana, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okotshani, okukhilimu, okwemvelo nokuningi. Noma yiziphi izindwangu zamakhasimende zingenziwa kumishini yethu yokuluka kanye nemishini yokusebenzisa ikhwalithi yekhwalithi.
Esedlule: Readymade Zebra Blind
Olandelayo: Izakhi ze-Britert Vertical